zokubopha ecacileyo, iibhokisi yokukhwabusha ecacileyo, iibhokisi ukuphakheja ecacileyo
Njengoko njengomyili sopakisho lento isoloko ikhangela iindlela lokuqamba ukuxhasa leshishini okanye zakho abaxhasi 'kwaye ukuba iimveliso zabo wabona kula kwithala.
Iibhokisi okhanya zibonise imveliso ngobuhle, ukudala ubuhle imincili, nokukhuthaza nombono ixabiso-ntengo. Kwaye bavumela ukuba ukudala unique kunye amehlo awayeno- yoyilo lwezakhiwo kunye graphic, abaninzi akwenzeki kunye paperboard.
HLP Klearfold ixhasa kuwe ubuchule bethu achazayo uyilo zesakhiwo kunye ngokupheleleyo-umbala prototyping ekhawulezileyo ubunakho zethu. Kwaye siza kubaxhasa abaxhasi zakho ngobugcisa shishini-phambili, kunye namandla ukuxhasa ukuqalisa ezinkulu, zamazwe ngamazwe. Sinikezela indalo ongenakukhethwa APET, RPET erisayikilishiweyo-umxholo, kunye bio-PET kumabakala ibhokisi, kwaye yethu yobunikazi Soft ndezela ® iteknoloji kokufaka kudala Klearfold ® iibhokisi yeplastiki esicacileyo imigca upholile, uhlambulukile ukuba enze zijikeleza kwimigca ezizalisa ezenzekelayo.
Ukuze ufumane ulwazi olongezelelweyo okanye inkxaso yakho inkqubo elandelayo uyilo, nceda qhagamshelana noMphathi lwethu Ulwalamano Creative, Karen Werther, ku 718 554-3271, okanye karen.w@hlpklearfold.com.